May 29, 2019 - MM Live News
မိခင်အိမ်မက် အတိုင်း တကယ်ဖြစ်လာခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသူတစ်ဦး…..
May 29, 2019 MM Live
မိခင်အိမ်မက် အတိုင်း တကယ်ဖြစ်လာခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသူတစ်ဦး May 29,2019 ထိုင်းနိုင်ငံ နကော်နရုတ် ခရိုင်မှာနေထိုင်နေတဲ့ မချယ်ရီ အသက် ၂၇ နှစ်ဟာ ကို မိခင်က အိမ်မက်ပေးတယ် ….ေ၇ွှတွေသူများခိုးလိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၁၀နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ပြီး စုဆောင်းထားတဲ့ ရွှေ(၇) ကျပ်သား ကို ဘယ်မှာဖွတ်ရမလည်း မသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဓါးမြသူခိုးတွေရန်ကိုလည်း ကြောက်ရ-ကိုယ်မှာတချိန်လုံး ဆွဲထားလည်းသူများလုမှာ စိုးရိမ်စရာကာလမို့ သားအမိနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက် နေအိမ်နဘေး က မြေကြီးကို တတောင်သာသာတူးပြီးေ၇ွှခုနှစ်ကျပ်သားကိုမြေမြုပ် ပေးခဲ့သူဟာ ချယ်ရီရဲ့မိခင်ဖြစ်ပါတယ်၊။ ယခုလ( မေလ )၄ရက်နေ့ က မြုပ်ထားခဲ့တဲ့ေ၇ွှ(၇)ကျပ်သားကို မေလ(၂၇) မှာ ပြန်ဖေါ်ကြည့်တဲ့အခါေ၇ွှထည်းထားတဲ့အိပ်တွေသာတွေ့ ရပြီး အတွင်းကေ၇ွှတွေ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ […]
ဦးဝီရသူ ကျောင်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ရှာဖွေ ဧရာဝတီ၊ မေ ၂၉၊ ၂၀၁၉ မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်အတွင်းရှိ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ သီတင်းသုံးနေထိုင်သည့် ဓမ္မသဟာယ ကျောင်းတိုက်သို့ မြို့နယ် သံဃနာယက ဆရာတော်များနှင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ က ဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုများ ပြလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဆရာတော် သီတင်းသုံးသည့် ကျောင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ရှာဖွေရာတွင် ဦးဝီရသူအားမတွေ့ရှိ်ခဲ့ဘဲ တခြား ဆရာတော်အချို့နှင့် အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အချို့သာတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ Credit – burma.irrawaddy Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဦးဝီရသူ ကြောငျးအား ရဲတပျဖှဲ့က ဝငျရောကျရှာဖှေ ဧရာဝတီ၊ မေ ၂၉၊ ၂၀၁၉ မန်တလေးမွို့ မဟာအောငျမွမွေို့နယျ မစိုးရိမျတိုကျသဈအတှငျးရှိ ဆရာတျော ဦးဝီရသူ သီတငျးသုံးနထေိုငျသညျ့ […]
မန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးက ပိုက်ဆံအတောင်းကြမ်းတဲ့ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများ
မန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးက ပိုက်ဆံအတောင်းကြမ်းတဲ့ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများ မန်း​လေးဗဟိုအမျိုးသမီး​ဆေးရုံက သန့်​ရှင်း​ရေး​တွေပါ။ အလကား​နေရင်း ပိုက်​ဆံ​တောင်းကြမ်းလွန်းလို့သိ​အောင်​တင်​ပြတာပါ။ သူတို့လက်​ထဲက ကိုင်​ထားတဲ့ ​ခေါင်းစွပ်​​လေးနဲ့ ခွဲခန်းအကျီ င်္​လေးကို​လျော်​ခ ၅၀၀၀​ တောင်းတယ်​။ ခွဲခန်းထဲက အထွက်​မှာ အဝတ်​​လျှော်​ခ ၁၅၀၀၀​ ပေးပြီးသားပါ။ ​ဆေးရုံက စစ်​စတာကြီးက သူတို့​တွေထပ်​​တောင်းရင်​ မ​ပေးရဘူးတဲ့ မှာထားပါတယ်​။ သူတို့က ​ပေါ်တင်​ပဲ​ တောင်းတာဗျာ။ ဒါ​လေး​လျှော်​ဖို့ ၅၀၀၀ တဲ့​လေ။ စဉ်းစားကြည့်​ပါခွဲရလို့​ ဆေးဖိုး​ပေးရတာ ၃၀၀၀၀ ပဲကုန်​တယ်။ ​သန့်​ရှင်း​ရေးသမား​တွေ​ တောင်းတာက တစ်​​နေ့ လူနာတစ်​​ယောက်​ကို ၁၀၀ဝဝ​ လောက်​ရှိတယ်​​။ ဆေးရုံမှာ ၁၃ ရက်​ တိတိ​ နေရတယ်။ ​​ငွေ ၅၀၀,၀၀၀ ကုန်​တယ်​​။ တော်​ကြာ​နေ​ သွေးစစ်​ဖို့သွားယူရမယ်​။ လာ​ပြောတယ်။ ​လာ​ပြောခအတွက်​၂၀၀၀​ တောင်းတယ်​။ […]
လိုင်းပေါ်မှာ ဟာသဖြစ်နေတဲ့ဒီပုံ သိတဲ့သူရော …မသိသေးတဲ့သူအတွက်ပါ မျှဝေလိုက်ပါတယ်….
ဒီပုံကို ဟာသပုံ အမြင်နဲ့ ကျွန်တော်သုံးမိခဲ့ပါတယ်။သိတဲ့သူရော မသိသေးတဲ့သူအတွက်ပါ ကျွန်တော် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ကိုလည်း မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် အကြုံပြုလို့ သိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာသ ပုံ ဟာသ အမြင်အနေနဲ့ မသုံးဖို့ ကျွန်တော် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးပုံပါ။ ဟာသ အရွှန်းဖေါက်တဲ့သဘောနဲ့ မသုံးစေချင်ပါဘူး။တိဘက်ဒေသနဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ဘုရားဝတ်ပြုရင် အဲ့လိုပုံစံနဲ့ ရင်ဘတ်ကို မြေပေါ်ထိ ဝတ်တွားခယ ပြီး ဝတ်ပြုလေ့ရှိ်ပါတယ်။ သူတို့ ဓလေ့ ယုံကြည်မှုပေါ့။ ငရဲမကြီးစေချင်လို့ပါ။သိတဲ့သူတွေ မြင်ရင် မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ သိက္ခာကျစရာဖြစ်မယ် ( ကျွန်တော် သုံးခဲ့မိတဲ့အပေါ် ရှက်မိပါတယ်။) ပုံက….အဲ့ဒါ တိဘက် သို့ ဘူတန်နိုင်ငံသူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် တဲ့။အရမ်းရှေးဆန်တဲ့ မဟာယာန တွေ ရဲ့ ဝတ်ပြုပုံ တစ်မျိုးပါ။ […]
အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၁၅၂/၃ ရဲကင်းမှ ရဲတပ်သားကို ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်း လုယူမှုဖြစ် အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၁၅၂ / ၃ မိုင်အနီးရှိ ရဲကင်းတစ်ခုတွင် တာဝန်ကျနေ့သည့် ရဲတပ်သားကို ဓားနှင့်ခုတ်သတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်းလုယက်မှု ယနေ့(မေလ ၂၉ ရက်) မနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဖြစ်စဉ်မှန်ပါတယ်၊ လောလောဆယ်တော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်၊ အသေးစိတ်ကိုတော့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး”ဟု ဇီးပင်သာအမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ကျရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်းလုယက်ခံရသည့်သူမှာ ရဲတပ်သားအောင်စိုးဝေ ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ရုပ်အလောင်းကို ယနေ့မနက် ၇ နာရီက တောင်ငူဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။ သတင်း – ကိုကို / ဓာတ်ပုံ – သားကြီးဖေစ့်ဘွတ်ခ် unicode အမွနျလမျးမိုငျတိုငျ ၁၅၂/၃ ရဲကငျးမှ ရဲတပျသားကို ဓားဖွငျ့ခုတျသတျပွီး […]
မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး ရွေးယူသင့်သလဲ….?သားအတွက် အဖေ့ရဲ့အကြံပြုချက် ..
သားအတွက် အဖေ့ရဲ့အကြံပြုချက် .. ငါ့သား အိမ်ထောင်ဖက် ရှာနေတယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေရဲ့,ရင်သားနဲ့တင်ပါး အရွယ်အစားအတွက် မင်း စိတ်မပူနဲ့… နှလုံးသား နဲ့ဦးနှောက် အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ ။သူမရဲ့ချစ်မေတ္တာနဲ့ သည်းခံစိတ်အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ ။ နောက် ၅ နှစ် ၁၀ နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါ ရင်သားနဲ့တင်သားတွေက ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ အခု မင်းအမေကိုပဲ ကြည့်လေ …ရင်ပြားကြီးနဲ့တင်ပြားကြီးသာ ကျန်တော့ပေမဲ့ငါတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြတယ်။ငါ့သား ငွေကို ချစ်တဲ့မိန်းမတွေကို သတိထားပါ။ အဲ့ဒီ မိန်းမတွေဟာ အချိန်ပြည့် …သူတို့ရဲ့ ဆံပင်တွေ အဝတ်အစားတွေ ဖိနပ်တွေ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေနဲ့ မိတ်ကပ်တွေအကြောင်း ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီ … အရာတွေ မပါဘဲနဲ့လဲ ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာ ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အချစ်မပါဘဲတော့ အိမ်ထောင်ရေး မတည်တံ့နိုင်ဘူးပေါ့။ […]
Zawgyi စိတ်ရဲ့ စွမ်းအားက သိပ်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ ဟိုရက်က မလင်းဇာနည်ဇော်က fbမှာ “မမေသဉ္ဇာဦး အိမ်တက်ပွဲ အိမ်ကြီးက လှလိုက်တာ ခမ်းနားလိုက်တာ” ဆိုတာတွေ တင်ထားတော့ စိတ်ထဲမှာ “ဟင် မဇာကြီးက ငါတို့လည်း မဖိတ်ဘူး ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ကိုယ့်မှာ သွားချင်လိုက်တာ “ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာတောင် မဇာကြီးကို ကိုယ့်မဖိတ်လေခြင်း ဆိုပြီး ပြောနေသေးတာ….ပြီးတော့မှ အင်တာဗျူးတွေမှာ မဇာကြီးက သူ့အိမ်မဟုတ်ပါဘူး သူ့မိတ်ဆွေအိမ်ပါဆိုတာ ပြောတော့တောင် အမှတ်တရ သတိထားမိနေသေးတာ၊ အဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုလည်း စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်တွေ့ချင်နေတာ အားကျလို့လေ။ တနေ့က ညနေ ဆိုင်သိမ်းခါနီး မဇာကြီး ဖုန်းဆက်လာတယ် “ကို29ရေ ရွှေဘယက် ကြီးကြီးလှလှ တဆင်စာ ရှိလား မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လိုချင်တယ် ဆိုလို့ ကို29ဆိုင် ညွှန်ပေးထားတယ်” […]
”ပြည်ပ မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ အကုန်လုံးကိုပြန်​ တောင်းပန် လိုက်​တဲ့ သင်းသင်း …
”ပြည်ပ မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ အကုန်လုံးကိုပြန်​ တောင်းပန် လိုက်​တဲ့ သင်းသင်း … May 28, 2019 Thi Haနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များNo Comment on ”ပြည်ပ မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ အကုန်လုံးကိုပြန်​ တောင်းပန် လိုက်​တဲ့ သင်းသင်း … “ပြည်ပ မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ အကုန်လုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်သင်းသင်း ကိုရှုတ်ချပြီး ပြောဆိုထားတဲ့ အဘွားကြီး အတွက်ပဲရည်ရွယ်တာပါ Live ကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီး သုံးသပ်ပေးကြပါ” သင်းသင်း … credit : 8daytv “ပွညျပ မှာ လုပျကိုငျနတေဲ့ အဈကိုတှေ အဈမတှေ အကုနျလုံးကို တောငျးပနျပါတယျသငျးသငျး ကိုရှုတျခပြွီး ပွောဆိုထားတဲ့ […]